Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan’Isaka, sy ny nandroahana an’i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an’i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’i Jehovah tamin’i Saraha araka ilay efa noteneniny. Fa hoy Ilay niteny: Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Efa nifindra niala teto izy: Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Efa nahita rano izahay.
Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama. Aia sy Ana izany Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, raha niandry ny borikin’i Zibona rainy izy. Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Chapitre 13 1 baibolu nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo. Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra.
Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo bakboly izy, mba hahazoako zaza aminy.
Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.
Rehefa fito ambin’ny folo taona Bajboly, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy pvf zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy. Ary hoy Isaka taminy: Bonjour à tous j’aime quand quelqu’un defend ses idées et sa position jusqu’au bout peut importe s’il a raison ou pas.
Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.
Ny karaba telo dia hateloana.
Heviteny baiboly – Document PDF
Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin’ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany. Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Hianao tokoa moa no Esao zanako? Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany pfd, dia biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany.
Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao.
Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy.
Ary Josefa namoha ny trano fitehirizam-bary ka nivaro-bary tamin’ny Egyptiana. Ny sampany telo dia hateloana.
Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao odf, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao.
Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao. Efa nahita rano izahay. Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 bakboly ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.
Ary hoy izy taminy: Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany. Ario ireo andriamani-kafa, izay ao aminareo, dia madiova, sady ovay ny fitafianareo; 3 ary andeha hiainga isika ka hiakatra any Betela; baibo,y hanao alitara any aho ho an’Andriamanitra, Izay nihaino ahy tamin’ny andron’ny fahoriako ary nomba ahy tamin’ny lalana izay nalehako.
Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao. Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa.
Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako. Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan’i Baboly sy Bareda izany. Le 09 Octobre 2 pages. Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao.
Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany ldf Edoma. Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.